June 14, 2019 - ThutaSone
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ရေမဆေးသမားများအတွက် ၁ ဧကလုပ်ကွက်များ တရားဝင်ချပေးမည်၊ ကုမ္ပဏီကြီးများ ကျောက်တူးခွင့် မရတော့၊
June 14, 2019 ThutaSone 0
ရေမဆေးသမားများအတွက် ၁ ဧကလုပ်ကွက်များ တရားဝင်ချပေးမည်၊ ကုမ္ပဏီကြီးများ ကျောက်တူးခွင့် မရတော့၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်တဲ့ နယ်မြေအတွင်းက ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေနေသူတွေနဲ့ တပိုင် တနိုင် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် တရားဝင်တူးဖော်နိုင်တဲ့ လုပ်ကွက်နေရာတွေ သတ်မှတ်ချထားပေးမယ်လို့ သစ်တော၊ သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက […]
ကဲ..ပရိသတ်ကြီးရေ.. လတ်တလောအွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှု့သူများနေတဲ့ ဆာလာအိတ်ကို သော့ခတ်သိမ်းတဲ့ ကိုရင်လေး….
ကဲ..ပရိသတ်ကြီးရေ.. လတ်တလောအွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှု့သူများနေတဲ့ ဆာလာအိတ်ကို သော့ခတ်သိမ်းတဲ့ ကိုရင်လေး…. ူကြည့်ရှု့သူ များနေတဲ့ ဆာလာအိတ်ကို သော့ခတ်သိမ်းတဲ့ ကိုရင်လေး… ဒီနေ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ကိုရင်လေးတစ်ပါးက မွေးရပ်မြေက မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဆီ ပြန်ဖို့အတွက် အဝတ်တွေကို ဆာလာအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး […]
ကနဦးသတင် “ တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရ”
“ကနဦးသတင်း တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး😱😱 လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရ”😱😱 တရုတ်နိုင်ငံတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရ… တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို […]
သော့တွဲကို အမြည်းမှတ်ပြီး ဘီယာနဲ့မျှောချလိုက်မိသူ…
သော့တွဲကို အမြည်းမှတ်ပြီး ဘီယာနဲ့မျှောချလိုက်မိသူ… တစ်ပတ်လုံး အလုပ်တွေကြားမှာ ခေါင်းစိုက်နေရတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် သောကြာနေ့ရောက်ပြီဆိုရင် အပျော်ဆုံးပါပဲ။ ညနေစောင်းလေူမှာ ဘော်ဒါ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ရစ်ရွှေရည်လေးနဲ့ အနားယူတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရေချိန်ကျော်ပြီး အမူးလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပြသနာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ တတ်စမြဲပါပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်းစီရင်စုက အသက် ၂၆ […]
သားကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံဝင်ငွေလေးနဲ့ သားကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် အနုပညာလောကမှာ ခြေချနေတာ ဆယ်စုနှစ်တွေကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ကိုတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ကတော့ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့အနေနဲ့ သူ့မိသားစုအတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး သူ့သားကြီးကိုလည်း […]
စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ ပြည်သူတွေ နေတဲ့နိုင်ငံဟာ ကွန်ကရစ် တုံးဖိုးသက်သာပါတယ်
စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ ပြည်သူတွေ နေတဲ့နိုင်ငံဟာ ကွန်ကရစ် တုံးဖိုးသက်သာပါတယ် ဆွဲတင်ကြရအောင် စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ ပြည်သူတွေ နေတဲ့နိုင်ငံဟာ ကွန်ကရစ် တုံးဖိုးသက်သာပါတယ်… ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီကို ခေါ်င်းဆောင်တွေက လုပ်ပေးမှရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်… တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တဦးချင်း တယောက်ချင်းစီစည်းကမ်းရှိခြင်းစ စပြီးယူရတာပါ… ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတွေတဦးချင်းစီ စည်းကမ်းလိုက်နာကြ ကြပါစို့နော်… ကျွန်တော်တို့တတွေ […]
မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ရန် အလားအလာ မြင့်တက်နေပြီးလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီ
မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ရန် အလားအလာ မြင့်တက်နေပြီးလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ လေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ အလားအလာ မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဇွန် ၁၃ ရက်ညမှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အာရေဗျပင်လယ်မှာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း VAYU ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အိန္ဒိယကမ်းခြေကနေ ဝေးရာ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းကို စတင်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ မနေ့မနက် ၉ […]
ကချင်ဆရာဝန်မလေးရဲ့ လွမ်းစရာချစ်ပုံပြင် ဖျာပုံ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူလေးတ‌ယောက်……
ကချင်ဆရာဝန်မလေးရဲ့ လွမ်းစရာချစ်ပုံပြင် ဖျာပုံ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူလေးတ‌ယောက်…… 2011ခုနှစ် Final part1 ကြို့ပင်ကောက်ကို Field Training ထွက်ရတယ်.. မှတ်မှတ်ရရ February လကပေါ့.. ကျွန်နော်လဲ ဘယ် group နဲ့ join ရမလဲ မသိတော့, ၉တန်း ၁၀တန်းထဲက ခင်ခဲ့ […]
လေးစားပါတယ် မွေးရပ်ရွာလေးမှာ ရွှေတိဂုံပုံစံတူ စေတီဘုရား တည်မယ့် ဖြူဖြူထွေး
လေးစားပါတယ် မွေးရပ်ရွာလေးမှာ ရွှေတိဂုံပုံစံတူ စေတီဘုရား တည်မယ့် ဖြူဖြူထွေး ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေ ရိုက်ရင်း ပရိသတ်တွေများလာပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးတယောက်ကတော့ လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင် တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး ဇာတ်လမ်းတိုတွေ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးကတော့ သူနာမည်ကြီးလာတာနဲ့ အလျောက်သူနေထိုင်တဲ့ ရွာလေးကို တစနဲ့ တစ […]
ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ…
ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ… ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ် ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရောနေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ်လုပ်ရင် …ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားပြီဆိုရင် […]